Miverina any amin'ny Shopping School: Inona no horaisina any an-tsekoly?
August dia midika fa ny fotoana dia ny mikasa ny hidina an-tsekoly any an -tsekoly , ary mila mahafantatra izay tokony hampidirina any am-pianarana ianao. Na dia samy hafa aza ny sekoly, dia toro-lalana ankapobeny izany. Ataovy azo antoka ny manamarina ny biraon'ny mpianatrao momba ny mari-pahaizana amin'ny sekolinao.
Ny mpianatra ao amin'ny sekoly ambaratonga ambony dia afaka manantena fa ny sekoly dia hanome fitaovana fototra, anisan'izany ny fandriana roa sy matory, birao, seza, mpivarotra ary / na ny trano fidiovana. Ny mpamboly tsirairay dia manana ny fananany manokana, fa ny fanamorana ny efitrano dia mety tsy mitovy.
Inona àry no ilainao? Ireto misy zavatra maromaro mametraka ny lisitry ny fivarotana an-tsekolinao.
Raha misy fandriana sy rongony no omena, dia mila mitondra ny fandriananao manokana ianao:
Taratasy roa 2 (matetika ny roapolo na roa katroka amin'ny XL, saingy azonao antoka ny manontany ny fiainan'ny mpianatrao mialoha ny fividianana azy). Ny fananana takelaka roa dia midika fa afaka manana iray foana eo am-pandriana ianao ary iray ao anaty fanasan-damba.
Saron-tavoahangy matevina mba hitazomana ny mofomamy.
Bodofotsy sy / na mpampionona . Miankina amin'ny toerana alehanao any am-pianarana sy ny hatsiaka mety hitranga amin'ny ririnina, azonao atao ny mitondra entana matevina sy bodofotsy iray matevina.
Aza hadinoina ny fialan-tsakafo sy ny fitaovana fidiovana azonao atao, izay azonao atao mba hitehirizana ao amin'ny efitranonao ary ento any amin'ny efitra fandroana rehefa ilaina izany. Ny fitaovana fidiovana mety ilainao dia ahitana:
Fandroahana dite iray hitondra ny fanatanjahanao rehetra
Tavy sy lambam- pandriana - toy ny tapa-taratasy misy anao, mitondra farango roa farafaharatsiny mba hahafahanao manadio ny kitapo madio foana.
Kiraro dipoavatra , izay matetika no mpivady roa
Shampoo, conditioner, savony, fanasan-damba
Toothpaste, boboka, fandroana vava, lamosina
Tavy tavy, baoty kodiarana
Borosy sy menamena ary ny vokatra hafa rehetra ampiasainao matetika.
Saron'ny masoandro sy ny loto - matetika no tsy hay jerena, fa amin'ny fotoana marobe izay mety ho azonao eny an-kalamanjana ho an'ny fanatanjahan-tena sy ny asa aman-draharaha, ny fahatsiarovana ny fitafy masoandro dia afaka mitazona anao ho salama sy handoro maimaim-poana. Manampy ny lotion raha ririnina ny rivotra amin'ny ririnina ary mila mahandro ianao.
Mety ho toy ny tsy misy mpitaingina izany, saingy zava-dehibe ny mahatsiaro mitondra karazana akanjo samihafa, indrindra raha tsy afaka miverina any an-trano matetika ianao.
Atombohy amin'ny fanaovana antoka fa manana ny akanjo fitakiana akanjo ianao . Ny kodiarana fiakanjo dia mety miova, fa matetika ny akanjom-pirahalahiana na skirt sy akanjo mofomamy dia takiana, ary koa ny bokotra, ny fatorana, ary ny blazers. Azonao atao ny mangataka ny birao fianarana mpianatra ho an'ny fepetra takian'ny fitsipika mazava.
Raha mandeha any amin'ny sekoly iray ianao rehefa ririnina sy ny ririnina, dia mety hahatonga ny toetr'andro be dia be, anisan'izany ny orana, ny lanezy sy ny hatsiaka, ka te hahazoana antoka ianao hoe:
Boots mandeha amin'ny ririnina (tsy misy rano na rano)
Scarf, hatodona ririnina, fonon-tanana
Azonao atao ihany koa ny mieritreritra ny manangona karazana akanjo marobe, satria mety ho hitanao amin'ny toe-javatra samihafa mitaky fitafy samihafa. Azo inoana fa mila mitondra ianao:
Akanjo akanjo amin'ny fotoan-draharaha
Jeans, akanjo, ary akanjo hafa akanjo
Mpilalao baolina, kiraro fitafy, mivelatra
Pusters sy sweatshirts
T-shirt sy tanko
Ho gaga ianao hoe firy ny mpianatra no manadino ity lafiny iray amin'ny sekolin'ny fiandrasana: manasa ny akanjonao manokana. Ny sekoly sasany dia manolotra tolotra fanasan-damba izay ahafahanao mandefa ny akanjonao mba hosotroina, saingy raha mikasa ny hanao ny anao manokana ianao, eto izay ilainao:
Toeram-pandrosoana fanadiovana, remover-tainkitra, lamba vita amin'ny lamba maina
Kitapo fohy kely
Kitapo na rafitra karajia
Akanjo lava sy lambam-pandriana
Fitahirizana fitahirizana fitahirizam-bokatra ho an'ny akanjo fanampiny sy / na fametrahana ny savoninao
Boky & Sekoly School
Sekoly, na izany aza. Ataovy azo antoka àry:
Kitapo kitapo na kitapo entina mitondra ny boky / fitaovana ao am-pianarana
Ny teknolojia ilaina (iPads, ordinatera, calculer)
Ny famantaranandro fanairana (miaraka amin'ny famerenana ny pilina raha toa ka very ny herinaratra ianao)
Lamotra fanontam-pirinty ara-bola
USB na Flash Drive
Ny fitaovam-pianarana (ie, pens, pencils, binders, notebooks, post-its, highlighters, heaping, etc.)
Boky Kalandrie / fananganana / drafitra - mety ho ny findainao na ny takelaka, fa ataovy azo antoka fa misy fomba iray ahafahana manara-maso ny zava-drehetra
Fiarovana mahery vaika sy tady fampitaovana
Toeram-pisakafoanana misy seza (raha toa ka tsy mampifalifaly ny sezan'ny birao)
Aza hadinoina ny mpamatsy anao amin'ny ordinateranao sy ny findainao !
Bibikely sy sns
Na dia manome sakafo ho an'ny mpianatra aza ny sekoly ambaratonga ambony, dia maro no mahafinaritra mitandrina kely amin'ny tanana. Aza mandeha adala eto ary aoka ho azo antoka fa tsy manapaka fitsipika. Azonao atao ny mitondra:
Kitapo azo amidy, toy ny Tupperware
Kaopy matevina / kafe / tavoahangy rano
Fanandevozana azo ampiasaina / vilia / takelaka / fitaovana
Sakafo na fanatanjahan-tena tsy mila mandeha ho azy.
Fanondrahana / sponge
Sangisangy irery, toy ny popcorn sy chips
Fitsaboana sy Items Voalohany
Ny sekolinao dia mety manana torolàlana manokana momba ny fomba fitsaboana medikaly sy ny fanampiana voalohany, ary zara raha afaka mitazona fanafody ao amin'ny efitranonao ianao. Andramo miaraka amin'ny foibem-pahasalamana na birao fianarana mpianatra mba hangataka ny fomba hiatrehana izany.
Ny fananana kitapo manokana ho anao manokana dia mety hanampy amin'ny famoahana ny taratasy kely sy ny fanoroana
Mitondrà fanafody ilaina, fa ataovy azo antoka fa mitondra azy ireo any amin'ny olon-dehibe mety amin'ny toeram-ponenana ianao mba hiarovana azy
Na dia eo aza ny fitsaboana fanafody dia mety voarara tsy ho voatahiry ao amin'ny efitrano fianarana, koa aoka ho azo antoka ny manamarina
Tokony hekena ve ny sekoly tsy miankina?
Fiantohana fototra ho an'ny sekolin'ny fiandrasana
Ny boky mahazatra indrindra amin'ny sekoly ambaratonga faharoa
Fampitahana ny Baccalaureate iraisam-pirenena sy ny fampiofanana
Ireo olo-malaza izay nanatrika sekoly tsy miankina
Campaigns tany amin'ny sekolim-birao manokana
Ireo 12 tsara indrindra ho an'ireo mpianatra sy mpampianatra
Ahoana no hamafana ny fampiharana serivisy ho an'ny sekoly tsy miankina
Ny boky tsara indrindra ho an'ny ISEE sy SSAT
Ny Fianakaviana Hart avy amin'ny mpikatroka Professional
Dui Bu Qi, milaza hoe "Miala tsiny" amin'ny teny sinoa mandarin
Ny mety ho vokatry ny tsy fahombiazan'ny mpianatra
Tantaran'ny Lalao Olaimpika
Crustaceans, Crustacea Subphylum
Inona no atao hoe Sophists ao Rhetoric?
Ny fahasamihafana eo anelanelan'ny hazo sy ny kitapo fisaka
Fetisistes Foot izay mandia eo ambanin'ny tabilao
MIT - Fitsaboana momba ny teknolojia Massachusetts
Momba an'i Robert Frost, "Mijanòna amin'ny ala amin'ny takarivan'ny alakamisy"
Discover the Ballet of La Sylphide
Aiza no Tokony Hipetraka Ao Amin'ny Lakokosoko?
Famaritana ny tsiambaratelo azony: Ka
Verbs mitovy amin'ny 'Gustar'
Fomban-tsasatra nandritra ny fahavaratra nataon'i Ray Bradbury
Fomba fanaovana fanavotana tany Gresy fahiny
Ny famoahana ny alimanakan'i Ragnarök
Ahoana no fomba hananganana toetr'andro?
Mampihena ve ny Vicks VapoRub amin'ny tongotra?
Misy ny Poocha Starry ao amin'ny Sky Caned Canis Major
Fametahana sy fandavana
'Pres des Remparts de Seville' sy ny dikanteny Teknolojia
Mars Taurus manana famantarana Zodiac